Ny safidy tsara indrindra mankany Amazon | Androidsis
DaniPlay | 23/07/2021 22:00 | Nohavaozina amin'ny 24/07/2021 10:41 | Fampiharana Android
Amazon dia naka ny ampahany lehibe amin'ny tsena raha ny amin'ny fividianana Internet. Ny vavahady fanta-daza amin'ny varotra e-varotra dia tsy isalasalana fa iray amin'ny Internet be mpitsidika indrindra, efa manana trano fitehirizam-bokatra samihafa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao hamaly ny filan'ny mpanjifany rehetra.
Na eo aza ny maha iray amin'ireo eCommerce manan-danja indrindra azy, misy vavahady marobe izay mitazona ny fiparitahan'ny asa fanompoana tian'ny olona an-tapitrisany maro. Mianara momba ireo safidy tsara indrindra mankany Amazon, eo amin'izy ireo ny sasany izay fantatra fa niasa nandritra ny taona maro.
Izy io dia iray amin'ireo vavahady e-varotra mpisava lalana amin'ny Internet, miasa nanomboka ny 1995 ka hatramin'izao. Izy io dia heverin'ny maro ho toerana mety indrindra hahitana izay tadiavinao, manana fifampiraharahana amin'ny vidiny lafo, eny fa na dia ny fahafaha-manao tolotra amin'ny entana izay atao lavanty isan'andro aza. Safidy iray hafa ny fivarotana ny entanao manokana.
Mitohy ho iray amin'ireo sehatra mitarika noho ny mpampiasa an-tapitrisany mitsidika ny tranokala sy ny fampiharana misy amin'ny finday ity. Ny fahatsoran'ny fampiasana dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo tsara indrindra ankehitriny, izay safidy tsara ho an'i Amazon sy ny hafa ankehitriny.
Amin'ny eBay isika dia afaka mahita ny vokatra isan-karazany, milahatra amin'ny sokajy toy ny zaridaina, trano, elektronika, fanatanjahan-tena, fialam-boly, zavakanto, motera ary sokajy maro hafa. Mbola mavitrika hatrany ireo tolo-bidy ankehitriny satria liana amin'ny ankapobeny izy ireo, ankoatry ny fananana faritra misy tolotra isan'andro. Ny fandoavana ny sehatra dia amin'ny alàlan'ny karatra, famindrana ary PayPal.
eBay - Mividy sy mivarotra izao amin'ny tsena an-tserasera
Developer: eBay Finday
Ny fitomboany tao anatin'izay roa taona lasa izay dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo goavambe e-varotra izay ahitanao izay rehetra tadiavinao. Alibaba no tompony, be ny katalaogin'ny vokatra, ao no ahitanao ireo vokatra elektronika, fitaovana DIY, firavaka, kojakoja ao an-trano, ho an'ny biby fiompy sy sokajy maro hafa.
Misongadina izy io satria manana tolotra isan'andro amin'ny fijeriny izay antsoiny hoe "Super Deal", vokatra ambony naoty ary mampiseho ny fampisongadinana ireo sokajy tsirairay. Ho an'ny fisoratana anarana dia matetika manome fampiroboroboana miaraka amina vola fanampiny handaniana ao anaty magazay.
Betsaka ny vokatra fantatraSatria maro ny mpanamboatra telefaona, takelaka sy vokatra elektronika no mivarotra mivantana ny vokariny. AliExpress amin'ny alàlan'ny fampiharana azy dia mampiseho ny fampahalalana amin'ny antsipiriany, ary koa raha manana na tsia io vokatra manokana io.
AliExpress - Mividy mora, miaina tsara kokoa
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo tranonkala tonga lafatra mahita ireo vokatra isan-karazany an-tserasera, avy amin'ny fitaovana elektronika, solosaina sy kojakoja, finday, takelaka, fahitalavitra, akanjo, kilalao sy sokajy maro hafa. Newegg dia manana vokatra an-tapitrisany an-tserasera amin'ny fihenam-bidy lehibe, nefa koa amin'ny vidiny tsara indrindra.
Newegg dia tena mitovy amin'ny Amazon, na dia eo ankavia dia mampiseho ny menio ireo sokajy misy rehetra, mampiseho ireo marika amin'ny alàlan'ny sary sy izany rehetra izany raha vao jerena. Izy ity dia eCommerce noforonina 20 taona lasa izay, indrindra ny taona 2001 no niorenany an-tserasera.
Misy ny tolotra sy fampiroboroboana toy ny any amin'ny vavahady e-varotra hafa, tsy isalasalana fa iray amin'ireo avant-garde izay havaozina indraindray. Raha vantany vao midina ianao dia ho hitanao ny tolotra manokana amin'ny andronao, tolo-kevitra avy amin'ny fiarahamonina sy ireo fiasa vaovao maro hafa.
Walmart dia iray amin'ireo mpifaninana lehibe indrindra ao Amazon, izay safidy tsara amin'ny Internet, ankoatry ny fananana magazay ara-batana amin'ny faritany samihafa. Toy ny vavahady noforonin'i Jeff Bezos, manana tolotra lehibe amin'ny karazany rehetra izy, na vokatra teknolojia toy ny fitafiana izany.
Manolotra ny fahafaha-manangona ireo vokatra amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny alàlan'ny tranokala, izy io koa dia misy fampitahana vidiana amin'ny vokatra mitovy sy ny fampahalalana momba azy rehetra. Miseho ireo tolotra samihafa rehefa nosokafana ny pejy lehibe ary ny fandefasana dia maimaim-poana foana amin'ny baiko farafaharatsiny.
Ampio zavatra an-tapitrisany ao anatin'ilay fampiharana ho an'ny fividianana, misy amin'ny Internet na amin'ny fivarotana ara-batana angonina. Walmart dia tsy isalasalana fa laharana 1, miaraka amin'ny fisehoany mitovy amin'ny an'i Amazon ary safidy hafa tsara raha toa ianao ka monina any amin'ireo firenena misy ny foibeny.
Fiantsenana sy fivarotana Walmart
Izy io dia tsena natokana ho an'ny fividianana sy fivarotana zavatra isan-karazany, na hahitana ny haitao tadiavinao na vokatra ho an'ny trano, ankoatry ny zavatra hafa. Izy io dia iray amin'ireo pejy lehibe indrindra noforonina ho an'i Amerika Latina, ankoatry ny fananana ny fampiharana azy manokana.
Manangona vokatra an-tapitrisany izy, voalamina isan-tsokajiny sy toy ny hafa eo amin'ny pejy lehibe no ahitanao ny karazana tolotra rehetra amin'izao fotoana izao. Mercado Libre dia iray amin'ireo safidy tsara sy lehibe amin'ny Amazon raha mipetraka any Amerika Latina ianao amin'ny fifantohana amin'ilay tsena amin'ny fomba manokana.
Ny fampiharana dia miasa any amin'ireto firenena manaraka ireto: Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Silia, Venezoela, Peroa, Ekoatera, Uruguay, Costa Rica, Repoblika Dominikanina, Bolivia, Panama, Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, ary Puerto Rico.
Developer: Free Market
Iray amin'ireo fivarotana lehibe indrindra raha ny amin'ny fivarotana vokatra misy karazany maro, ao anatin'izany ny fitaovana elektronika, console sy lalao video, kojakojan-tokantrano, hatsaran-tarehy sy fahasalamana ary koa ireo sokajy maro hafa. Safidy iray hafa ankoatr'ireo voalaza ireo ny fahaizana mitazona kapila mozika, boky ary sarimihetsika amin'ny endrika samihafa.
Fantatra amin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra, ny rojo malaza any Alemana dia mamirapiratra ihany koa amin'ny andrana tsy misy VAT sy ny vokatra misy vidiny mifaninana marina. Azonao atao ny mitahiry vokatra hanangonana azy ireo any amin'ny magazay ara-batana toy ny mitranga any Walmart sy rojo malaza hafa.
Ny zavatra tsara momba ny MediaMarkt dia ny filaharan'ny sokajy, ao anatin'ny tsirairay amin'izy ireo dia misy sokajy ihany koa izy io ary misy vokatra azo vidiana, fa indraindray ianao mety hahita hoe "Tsy manana tahiry mandritra ny fotoana fohy". MediaMarkt dia nohavaozina rehefa mandeha ny fotoana mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa eo amin'ny pejy sy amin'ny rindranasa Android sy iOS.
Ny rojo frantsay FNAC malaza dia manolotra vokatra samihafa ao amin'ny tranokalany ary amin'ny alàlan'ny fivarotana ara-batana misy any Eropa, saingy miasa ihany koa ivelan'ny kontinanta ity. Afaka mahita ny karazan-javatra rehetra ianao, ao anatin'izany ny vokatra elektronika, kilalao, fitaovana, kapila mozika, DVD, ary koa serivisy samihafa.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia ampiasain'ny FNAC ho an'ny mpampiasa afaka mividy zavatra sy manangona azy ireo ara-batana ao amin'ny magazay, afaka mandoa vola mialoha. Manana fivarotana maherin'ny 33 ny orinasa any Espana ary manolotra ny mety ho mpikambana ao amin'ny 15 euro fotsiny miaraka amin'ny tombony manokana na amin'ny tranonkala na amin'ny fivarotana.
FNAC: Ilay fivarotana amin'ny findainao - Fiantsenana an-tserasera
Ny tsenan'i Japoney Rakuten dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy amin'ny fomba goavambe hijoroana mankany Amazon sy vavahady hafa izay mbola miasa mandraka ankehitriny. Manome ny safidy afaka mividy avy amin'ny firenena rehetra izy io, satria ny orinasam-panaterana dia hataon'ny orinasa mpamonjy entana izay tonga hatrany amin'ny vazan'izao tontolo izao.
Misy safidy maro, hita ireo sokajy, ankoatr'izay dia misy sokajy mba hahitana izany vokatra tadiavinao izany amin'ny fotoana marina. Rakuten dia iray amin'ireo goavambe Aziatika ankehitriny ny sainy dia mifantoka amin'ny faritany hafa, anisan'izany i Eropa.
Developer: Rakuten France
Teraka tamin'ny 2000 ny serivisy niaraka tamin'ny mpihaino B2B, androany dia nitatra be izy io mba hanolorana karazana vokatra rehetra amin'ny alàlan'ny orinasa. SoloStocks dia nitombo ary ankehitriny misy olona an'arivony maro mitazona azy io ho iray amin'ireo tianao indrindra rehefa mitady vokatra.
Ny orinasa sy ny olon-tsotra dia afaka manomboka mivarotra ao aminy amin'ny fisoratana anarana teo aloha ihany, tsy mila fotoana be izany amin'ny alàlan'ny fampidirana data vitsivitsy. Ny SoloStocks tamin'ny taona 2018 dia voatery niditra tamin'ny bankiropitra, saingy efa tamin'ny taona 2021 dia mahita tsikelikely ny hazavana izy ary mivoaka avy ao amin'ilay lavaka io.
Ny orinasa amerikana dia nanjary iray lehibe noho ny varotra an-tserasera tamin'ny alàlan'ny fampiharana natomboka tamin'ny 2010. Izy io dia miompana amin'ny varotra vokatra isan-karazany, izay ahafahan'ny orinasa sy orinasa mivarotra ireo zavatra ireo amin'ny vidiny tena ambany.
Wish dia manana mpampiasa maherin'ny 200 tapitrisa manerantany, nihoatra ny 500 tapitrisa ny fampidinana azy ary eo an-tampon'ny avo indrindra. Izy io dia mivarotra telefaona finday, akanjo, kojakoja ary zavatra maro amin'ny vidiny ambany, ny fanombanana azy dia mamela azy ho ao amin'ny top 10 an'ny eCommerces any Espana.
Faniriana - Aza mandoa vola be
Ny rojo frantsay Carrefour dia iray hafa izay misy atiny lehibe na amin'ny pejinao na amin'ny fampiharana. Ao amin'ny fampiharana dia afaka mahita vokatra an'arivony maro ianao, na elektronika, fitaovana ao an-trano, kilalao, solosaina ary sokajy tsy misy farany misy.
Manome ny safidy hahita ireo tolotra androany ianao, noho izany dia mila tsindrio ny sokajy iray ary avy eo tsindrio ny sokajy iray hahitanao ireo tena mahaliana. Carrefour dia manana ny zava-drehetra ao anaty tahiry, ankoatry ny fiaraha-miasa amin'ireo pejy ivelany amin'ny fivarotana vokatra miaraka amin'ny fiandrasana andro vitsivitsy.
Developer: Carrefour Spain
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny safidy tsara indrindra mankany Amazon
Tsy misy ny ecommerce, miaraka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, izay manome fahafaham-po ary raha ilaina ny manome antoka fa tsy akaiky an'i Amazon akory izy io ... dia ny fitsarana anglisy aza dia lasa banga eo anilany .... manamarina
Tena marina i Hummer, amin'izao fotoana izao dia vitsy ny manome fiheverana haingana sy manokana. Miaraka amin'i Amazon dia tsy nanana olana aho rehefa tonga ny fiverenana, afaka mamerina ny vola aloa amin'ny serivisy tsy nifanekeko, ankoatry ny zavatra hafa.